MDC Yoramba Yakatevera Nyaya Yekuti Isangane neZEC
Mbudzi 07, 2007
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, inoti haisi kufara nemhinduro yayakapihwa ne Zimbabwe Electoral Commission, pachikumbiro chayo chekuti nyaya dzesarudzo dzikurukurwe nemapato ose pamwe nemasangano anoona nezvesarudzo munyika.
ZEC yakati haioni chikumbiro ichi chiine musoro, sezvo iri kuita basa rayo nemazvo. Asi MDC inoti inoda kuti vazeye hurongwa hwe mobile registration exercise, pamwe nezvimwe zviri kunetsa mugadziriro dzesarudzo dzegore rinouya.
Asi sachigaro we ZEC, Va George Chiweshe, vaudza Studio 7 kuti sezvo vakatoita musangano nevemasangano akazvimirira oga, pamwe nevemapato anopikisa, havaoni zvakakodzera kuita zvakare mumwe musangano navo, panguva ino.
Asi MDC inoti iri kudzokera neChina ku ZEC nenyaya iyi, sezvo paine zvinofanirwa kugadziriswa. Mobile registration exercise yakanangana nekupa vanhu vari kumaruwa, kana dzimwe nzvimbo dziri kure nemahofisi ekwa Registrar General, mukana wekunyoresa sevavhoti kana kutora zvitupa, magwaro ekuzvarwa nezvimwe zvakadaro.
Kunyange hazvo hurumende ichiti yakawedzera mazuva echirongwa che mobile registration exercise, vanoongorora nezvesarudzo, vanoti hapana chashanduka pane chirongwa chakamboitwa zvakare muna Chikumi.
Sangano re Zimbabwe Election Support Network, rinoti muongororo yavari kuita, zviri kuratidza kuti vanhu vakawanda vachatadza zvakare kunyoresa sevavhoti muchirongwa ichi, icho chakatarisirwa kupera musi weChina svondo rinouya.
Va Noel Kututwa ndivo sachigaro ve ZESN.
Mutori wenhau weStudio 7 Carole Gombakomba aita hurukuro naVaKututwa, kuti tinzwe zviri mugwaro ravo, iro rinotsanangura zviri kunyanyonetsa pachirongwa ichi.